Teeppiitti dhaabbileen mootummaa fi dhunfaa erga cufamanii guyyoota shan ta’e – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooTeeppiitti dhaabbileen mootummaa fi dhunfaa erga cufamanii guyyoota shan ta’e
(BBC Afaan Oromoo) — Dhaabbbileen tajaajila uummataa kan dhuunfaa fi mootummaa magaalaa Teeppii erga cufamanii guyyoota shan ta’uu jiraattonni BBCtti himan. Daandiin magaalattii magaalotaa fi aanaalee ollaa waliin wal qunnamsiisu erga cufame immoo waggaan tokko darbeera jedhan.
Bulchiinsi magaalattii geejiba addaan cite deebisuuf abbootii qabeenyaa konkolaataa qaban tajaajila akka kennan dirqisiisullee milkaa’uu waan hin dandeenyeef to’annoo jala oolaniiru.
‘’Manneetiin daldalaa kan cufaman daandiin Teeppii irraa Maashaa geessu bulchiinsi naannichaa dirqamaan bansiisuuf yaalee didnaan, abbootii konkolaataa hidhaa galchinaani,’’ jedhan jiraataan maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadan.
Bulchitoonni geejiba dirqamaan jalqabsiisuuf yaaluun, achii immoo warreen tajaajila kana kennuu didan hidhuun, hawaasni dhaabota daldalaa akka cufu isa taasise kan jedhan immoo jiraata biroo maqaan isaanii akka hin dhahamne fedhani dha.
”Ji’oota sadiif dhaabbilee fayyaa malee kaan tajaajila kennaa hin jiran”
‘Kana booda waa’een godina Walaayitaa kan isa ilaallatu mana maree saba kanaa qofa dha’
Jiraataan magaalattii biraa immoo ’’qaamni naannichatti hidhatee socho’u manneetii daldalaa akka hin banne ajajuun dhaabota mootummaa dabalatee kaanillee erga cufamanii guyyaa shan darbeera,’’ jedhan.
Teeppii magaalaa Kubbiitoo jedhamun jiraadha kan jedhan immoo, ’’gaaffii caasaa uummatni kaase hanga yoonaa gatii hin deebineef komiitu mormii kana kaase” jedhan.
Naannichatti dhaabbileen mootummaas tahe kan dhuunfaa akka hin hojjenne kan himan jiraataan kun dargaggoonni daggalatti galaniiruu jedhan.
Jiraataan magaalattii biraa immoo,’’ hidhataan dhaabbata keessan cufaa jedhe hin jiru, hawaasni nageenya mataasaaf sodaateetu cufe,’’ jedheera.
Naannoo Kibbaatti ajajaan poolisiin humna addaa koomishinar Indaala Abarraa, amma dubbiin qabbanaa’uu himuun kana kan raawwatu ‘’shiftoota hidhate dha’’ jechuun BBCtti himan.
Shiftoonni naanichatti socho’an ‘’konkolaataa dhaabachiisanii hatu, mana namaarra deemanii qarshii saamu, yoo didan ajjeesu,’’ jechuun rakkoo qaqqabsiisan himu.
Jiraattonni BBCn dubbise dargaggoonni bosona galan jedhaman meeshaa waraanaa hidhachuu mirkaneessaniiru.
Koomishinarichi hawaasni nagaa akka barbaadu himuun, haa tahu malee ‘’dhaabbata daldalaa banuuf yoo jedhan hin baniinaa sin jalaa gubna,’’ akka jedhaman himu.
Qaamoti hidhatan kunneen,’’aanaa Yakkii jedhamu keessatti akka socho’an,’’ koomishinarichi dubbatu.
Miidhaa hidhattoonni kunneen qaqqabsiisaniin buqqa’anii kan Teeppii galaniifi Teeppii irraa immoo baqatanii kan deemaniifi qabeenyaan isaanii kan barbadaa’e fi kan du’an jiraachuu himu.
Mootummaan namoota kunneen qe’ee isaaniitti deebisuuf hojjechaa jiras jedhan.
Koomishinarichi warreen shiftaa dha jedhan keessa muraasni to’annoo jala ooluufi hokkora uumu warreen jedhamanis seeraan gaafatamuu isaanii dubbatu.
Jiraataan BBCn dubbise dargaggoonni bosona galan jedhaman naannichatti qonna bunaafi abukaadoodhaan kan jiraataniifi magaalaa mana kan qaban yoo tahu, ’’dargaggoonni kunneen miidhaa qaamoti nageenyaa qaqqabsiisan baqataniitu qonna isaanii eeguuf galanii dhokatan,’’ jedhan.
Dhaaboti kunneenis ergaa dargaggoonni dabarsaniin sodaadhaan cufame jedhu.
Naannoo Teeppiitti yeroo dheeraaf koomaand poostiin buufatee kan jiru yoo tahu. Raayyaa Ittisa Biyyaa fi polisiin addaa naannichaa illee akka socho’u himu.
Magaalattiitti dargaggoonni baayyee hidhamuufi rakkoon kun kan uumame jiraataan naannichaa gaaffii godina tahuu deebii argachuu dhabuufi ukkaamamuu dha jedhan.
Koomishinariichi immoo dargaggoonni gaaffii caasaa qabatanii addabaabaayitti bahanii jiru,’’hawaasni garuu gaaffiin keenyi caasaan mootummaan deebi’aa nuti nagaa barbaadna,’’ jechuu himuun,warreen hannaan qabeenya horatantu nagaa booressaa jedhan.
Waliitti bu’insa qaamota nageeyaa fi dargaggoota gidduutti uumameen dargaggoonni du’anillee jiru jedhan.
Gaaffiin ka’e maali?
Godinni Shakkaa dhalattoota saboota sadiitu baay’inaan keessa jiraata. Shakkaa, Shakkoo fi Mazangir.
Naannoo Kibbaa godina Shakkaa jala aanaalee sadiitu jira. Irra deddeebiin rakkoon bulchiinsaa akka irra gahu warreen komii dhiyyeessan kan aanaa Yakii keessa jiraatani dha.
Jiraattonni aanaa Shakkaa jalatti hin bullu jechuun irra deddeebiin komii dhiyeessaa turan. Rakkoon caasaa kun itoo hin hiikamiin turuu jiraattonni ni dubbatu.
Naannichatti nagaafi tasgabbiin yeroo garaagaraatti uumamuun jiraattonni qe’ee isaaniirraa waan buqqa’aniif komaand poostiin ramadamee nageenya eegsisaa jira.
Aanaa Yakkiis tahe magaalaa aanattii kan taate Teeppii daandiin quunnamsiisu erga cufamee bubbuluu jiraattonni dubbataniiru.
Karaan Jimmaa, Mizaan,Maashaa Goree fi Naannoo Gaambeellaatti geessu cufamuu fi tajaajilli geejibaa akka hin jirre dubbatu.
Aanaa Yakkii keessa sabaafi sablammoonni 18 ol akka jiraatan ni himama.
Hubachiisa ummata Tigarayii fi mootummaa federaala wayyaanee (TPLF)f Camadaa Hundee irraa, Guraandhala 1, 2018 Dubbiin…
Awuroopaa fi Ameerikan Mootummaa Ergatan Dhabaa Jiru Damee Boruu: Muddee 6, 2020 Bara 1884 Auwroopaan…